Soomaaliya oo mar kale dagaal sokeeye qarka u saran
Buluugleey Julay 29, 2005
Col. Cabdullahi Yusuf ayaa la saadaalinaya inuu ku qancinayo dagaaloogaha Jowhar degen inuu isku diyaariyo inuu dagaal ku qaado Muqdisho. Qorshahaas ayaa u muuqata in maleeshiyooyinka dagaalka USC ee jooga Xamar lagu mashquuliyo iska caabinta dagaaloogaha Jowhar. Halka Col. Cabdullahi Yusuf ay u qorsheysan tahay inuu maleeshiyadiisa uu kala yimid gobolka Bari uu dagaal ku qabsado Baydhabo. Tilaabada xigta wuxuu col. Cabdullahi damacsan yahay inuu ku qanciyo dadka reer Gedo in ay dhinac ka soo racaan duulaanka ballaaran uu ku soo qaadayo koonfurta Muqdisho.
Dhanka kale nimanka ka taliya Muqdisho ayaa iyaguna isku diyaarinaya iney dib u soo abaabulaan maleeshiyooyinka beelaha USC. Waxayna bartilmaameed ka dhigan doonaan gobolka Bari iyo xaruumaha kaloo laga soo abaabulayo duulaanka ballaaran ee lagu soo qaadayo Gobolka Banadir..
Dowlada Itoobiya oo aan awoodi karin iney ciidamo ay leedahay ka dagaalamaan gudaha Soomaaliya ayaa hub iyo tababar ku dhiiri gelineysa Col. Cabdullahi Yusuf inuu dagaal la galo Soomaalida degan gobollada Dhexe ilaa Koofurta ilaa gobolka Banadir. Waxeyna rajo ahaan ku qancineysaa in haddii Col. Cabdullahi Yusuf uu ku guuldareysto duulaanka Xamar ay hubaal u tahay gacan ku heynta gobolada Jubooyinka oo ah xeelada ugu muhiimsan eek u taamayaan reer Bariga.
Isbaheysiyada dagaalka ee qaabka ceynkaas ah ku dhisma ayaa inta badan salka ku haya isqiyaameyn qarsoon oo degaan iyo awoodba si dadban loogu heshiinayo. Gaarista ujeedada dagaalka ka dibna waxaa dhaci karta in uu burbur ku yimaado isbaheysiyadaas, kadib marka ay soo baxdo isbedelo siyaasadeed oo salka ku haya balanfuryadii axdiyadii hore. Waxaa la xiiseyn doonaa balamo cusub oo ka abuurma dagaal, markaasna waxaa dhici doonta in ay markale isku biiraan kooxo horey isku maandhaafsanaa.
Waxaa kaloo jira waddamada daneeya arrimaha Soomaalida ayaa ku qanacsan inaan la sameyn dib-u-heshiisiin dhabah, sidaas daradeedna loo baahan yahay in dib loo abaabulo shir dib-u-heshiisiin oo aysan lug ku lahayn dowladaha IGAD. Wadamada deeqda bixiya ayaa iyaguna saluugsan habka ama qaabka ay dowlada uu horboodayo Col. Cabdullahi Yusuf ee ku dooneayo in uu ku helo dhaqaale deg-deg ah. Dhaqaalahaas deeqda lagu helo ayaa loo micneystay in uu ku dhisanayo ciidamo beeleed oo uu doonayo in ummadda Somaaliyeed fikirkooda xorta ah lagu caburiyo. Waxey sidoo kale deeq bixiyeyaashu ay walaac ka muujiyeen doorka dowlada Itobiya oo u muuqata in ay deeqda la siiyo dowladaas ay ku damacsan tahay iney hub uga bedelato. Taasna waxey dhalatay kadib meeshii laga filayey in la maalgeliyo dib-u-heshiisiin in Col. Cabdullahi Yusuf uu bilaabay qoris ciidamo qabiil oo aan la isku raacin waqtigan in la gudo galo.
Wararka ka imaanaya dalalka dibeda ayaa xaqiijinaya ineysan diyaar u ahayn iney taageero dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed siiyaan Col. Cabdullahi Yusuf. Waxaana loo arkaa mudadan la joogo inuusan ahayn qof u bisil dib-u-heshiisiinta ummadda iyo dhisma dowlad Soomaaliyeed oo ka madaxbanaan wadamada deriska. Waxaa aad loo saadaalinayaa in haddii la waayo lacagta loo qoray ciidamada qaabka beelaha lagu soo uruuriyey ay jahwareer hor leh ku keeni doonto siyaasada iyo amaanka gobolka uu ka soo jeedo Col. Cabdullahi Yusuf, islamarkasna waxay sababi doontaa dagaal sokeeye ee markale dalka Soomaaliya ka qarxo.